मुलुक समृद्धिको छैटौं पूर्वाधार खेलकुदः सदस्य सचिव विष्ट | Neplays.com
मुलुक समृद्धिको छैटौं पूर्वाधार खेलकुदः सदस्य सचिव विष्ट
By Neplays	 Last updated Nov 6, 2018
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो पटक युवा खेलाडी प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । १० दिनसम्म चलेको शिविरमा कराते, तेक्वान्दो, उसु र एथ्लेटिक्स खेलका युवा खेलाडीलाई समावेश गरिएको थियो । राष्ट्रिय टोलीको ब्याक अप तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेप अन्तर्गतको खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानले सुरु गरेको यस शिविरमा करातेका २१, तेक्वान्दोका १३, उसुका १४ र एथ्लेटिक्सका २६ खेलाडी सहभागी थिए । १० दिनको प्रशिक्षण पर्याप्त त होइन तर, सुरुआत हुनु राम्रो हो । राखेप सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले पनि यो स्वीकारेका छन् । सीमित श्रोत र बजेट तथा राज्यको प्राथमिकता खेलकुद नहुनुले खेल क्षेत्रको स्तरोन्नति हुन नसकेको सदस्य सचिव विष्टको ठहर छ । राखेपले गरेको युवा प्रशिक्षण विशेष शिविरका बारेमा सदस्य सचिव विष्टसँग हाम्रा सहकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले कुरा गर्नुभएको छ ।
यो प्रशिक्षण शिविरको उद्देश्य के हो ?
खेलाडी तयार गर्ने हाम्रो तरिका नै परम्परागत भयो । हामीले खेलाडी उत्पादन गर्दा एउटा तहमा मात्र विश्वास गर्ने परिपाटी बन्यो । भोलिको पुस्ता अर्थात अर्को तहमा खेलाडी तयार नगर्ने विगतमा जुन अभ्यास भयो, यसले नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने, छनोट गर्ने कुरामा हामी पछि पर्यौं ।
अब त्यस्तो नहोस भनेरै नयाँ खेलाडी छनोटका लागि हामीले उप–राष्ट्रपति कप चिल्ड्रेन्स गेम यू–१, यू –१८ को राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्छौं ।
उपराष्ट्रपति कप, राष्ट्रपति रनिङ शिल्डबाट छनोट भएका खेलाडीहरुले पनि राष्ट्रिय खेलाडी बन्नका लागि धेरै भन्दा धेरै वातावरण पाओस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अर्थात धेरै भन्दा धेरै प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण पाउन भन्नका लागि अहिले जुनियर टिम तर, आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका निम्ति योग्यता र सम्भावना भएका खेलाडीहरु छनोटमा पर्न सकुन् ।
यदि ती जुनियर खेलाडीमा त्यस खालको क्षमता छ भने, साफ गेम्समा समेत सहभागिता जनाउने अबसर प्राप्त गर्छन् । आजका निम्ति उनीहरुसँग क्षमता भए आजै सहभागी गराउने र भोलिका लागि पनि उनीहरुलाई व्याकअपको रुपमा राख्न सकिने गरी हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं ।
हामीले गत वर्षदेखि खेलाडी उत्पादन मा २ वटा प्रोजेक्ट गरेका थियौं । एउटा स्कूल टू नेशनल गेम र अर्को नेशनल गेम टू ओलिम्पिक ।
भनेको विगतमा हामीले सिमित ठाउँबाटमात्र खेलाडी ल्याउने गरेका थियौं अब त्यस्तो हुँदैन हो ?
विधिवतरुपमा राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने वाटो हामीले के गरेका छौं भने, उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन्स गेम र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड । अहिले हरेक बालबालिकाहरु स्कूलमा हुन्छन् । स्कूलभन्दा बाहिर त कोही पनि हुँदैन । क्लबमा हुने पनि स्कूलमा हुन्छन् । क्लबमा भएका पनि नभएका पनि सबै विद्यालयमै हुने भएकाले हामी विद्यालयमा जाँदा सबै समेटिने भए । त्यसैले हामीले उपराष्ट्रपति कप र राष्ट्रपति कपलाई मेन बेस बनाएका छौं ।
हाम्रो समाजले बालबालिकालाई खेल्न भन्दा पढ्न जोड दिन्छ, यसमा क्यालेण्डर कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
अहिलेसम्मको हाम्रो देशमा खेलाडी बन्न चाहनेले खेलकूद मात्रै पढ्न पाउने व्यवस्था छैन । वास्तवमा खेलाडी बन्न चाहनेले पनि न्यूनतम आधारभूत कुराहरु त पढ्न पर्छ । तर, खेलकूदकै मात्र पढाई गर्ने गरी हामीले शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रमको विकास गर्न सकेका छैनौं ।
यद्यपी यसका लागि हामीले विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा यसको पढाई गराउनु पर्छ भनेर अभियानमा लागेका पनि छौं । यस विषयमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा छलफल पनि अघि बढेको छ ।
अन्यत्र खेलाडीहरुलाई छुट्टै पढाईदेखि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरु राज्यले उपलव्ध गराएको हुन्छ तर, यहाँ छैन । त्यसैले विद्यालयको क्यालेण्डर हेरेर हामीले खेल आयोजना गर्नुपर्ने वाध्यता छ । तैपनि हामीले सबै कुराहरु मिलाएर अघि बढ्न खोजेका छौं । हाम्रो मौसम पनि फरक फरक छ । यहाँ हिमाल, पहाड र तराई भएकाले यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले गरिएको तालिम भनेको खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि खेलाडीहरुमा आत्मविश्वास पैदा गर्ने नै हो । जुनियर खेलाडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने क्षमता छ भन्ने कुरा प्रमाणीत गरी सक्यौं । अर्थात, देशभरका विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धा गरेर स्वर्ण पदक जितिसकेका छन् । तर, तिनीहरुका कतिपय व्यवहारिक कठिनाई, प्रशिक्षणको अभाव, गरिबी लगाएयका कारणले कतै पलायन नहुन् भन्ने उद्देश्य पनि हो ।
१० दिनकै भए पनि यसले अर्को सन्देश राखेप नयाँ खेलाडी तयार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लागेको छ भन्ने प्रष्ट गर्न पनि हो । यो कार्यक्रम पहिला नै शुरु गर्नुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि राम्रो कामको सुरुआत गरेका छौं । यो प्रशिक्षण पछि आउँदै गरेको आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका लागि मंसिर २१ गतेदेखि जिल्ला छनोट शुरु हुँदैछ । त्यसमा यहाँ प्रशिक्षण गरेका खेलाडीहरु सहभागी हुन्छन् र त्यहाँ उनीहरुले सकारात्मक नतिजा निकाल्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
राखेपले मार्सल आर्टस र एथलेटिक्सलाई मात्र महत्व दिएको हो ?
खासगरी राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा खेलमा स्वर्ण पदक जितेका खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणमा ल्याएका हौं । किनभने हामीसँग धेरै खेलहरु छन् । स्रोत साधन सीमित भएकाले हामीले राष्ट्रपति रनिङ शिल्डलाई आधार मानेका हौं ।
उक्त प्रतियोगितामा ६ वटा इभेन्टस भएका थिए । जसमा मार्सल आर्टसका ३ वटा, एथलेटिक्स र दुई वटा टिम गेम थिए । कबड्डी र भलिबल समावेश गरिएका थिए । टिम गेमका खेलाडीहरुलाई पनि सहभागी गराउने इच्छा थियो । तर, बजेटको अभाव भएका भयो ।
मार्सल आर्टस भनेको नेपालले एशियन गेम्स र साग गेम्समा पदक ल्याउने सम्भावना भएको खेल हो । हामीले अरु खेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हो तर बजेट अभावले त्यो गर्न सकेनौं । अहिले सरकारको पनि यसमा ध्यान गएको छ । अर्को पटकदेखि पक्कै पनि बजेट बढेर आयो भने हामीले यसलाई अझ बढी विस्तार गर्नेछौं ।
वास्तवमा खेलाडीहरु काठमाडौंमा मात्र छैनन् । खेलाडीहरु गाउँ गाउँ कुना कन्दरामा छन् । त्यसैले अब हामी त्यतातर्फ लागिरहेका छौं । सीमित बर्ग र ठाउँबाट मात्रै खेलाडी तयार पार्दा यसले खेलकूदको समृद्ध हुन सक्दैन ।
अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीकृत सोच थियो । काठमाडौंमा मात्रै खेलाडी छन् यहाँ मात्र खेलकूदका संरचना बने । तत्कालीन शासकहरुले काठमाडौंमात्र रंगशाला बनाए । अहिले काठमाडौंमा अर्को रंगशाला बनाउने जग्गा नै छैन । तत्कालीन शासकको अदूरदर्शीताका कारण अहिले समस्या भइरहको छ ।
अहिले त्यसको असर के परेको छ भने अहिले एकै पटक देशभर रंगशाला निर्माण गर्नुपरेको छ । अहिले स्थानीयस्तरमा रहेका रंगशालाहरु रंगशालानै होइनन् । त्यो त राजाले विकास क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा भाषण गर्नका लागि बनाइएको मञ्च हो ।
हरेक विद्यालयका खेलकूद शिक्षक राख्ने, पाठ्यक्रम बनाउने भनेर तपार्ईले घोषणा गर्नुभएको थियो कहाँ पुग्यो त्यो घोषणा ?
हामीले भनेकै हो । यो दुई तीन वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले के सोचेका थियौं भने यसरी खेलकूद शिक्षक राख्दा खेलाडीहरु बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने थिएन । एउटा बिद्यालयले एक जना खेलकूद शिक्षक राख्दा देशभर ३९ हजार शिक्षक आवश्यक पर्छ ।
यसले विद्यालयमा खेलकूदको वातावरण राम्रो बन्छ भन्ने हो । यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । उसले शिक्षकको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । यसैगरी अर्थमन्त्रालयले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यो विषय धेरै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएकाले हाम्रो मात्र प्रयत्नले भएन । यसले मुर्तता पाएको छैन ।
तर अहिले बन्दै गरेको खेलकूद विकास ऐनमा यसलाई समावेश गरेका छौं । यदि उक्त ऐन हुबहु संसदबाट पारित भएमा कम्तिमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा एक जना खेलकूद शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्छ ।
हामीले विकासमा खेलकूदको पनि ठूलो हिस्सा छ भनेर बुझाउनै सकेका छैनौं । अहिलेसम्म विकास भनेका बाटो, विजुली, पर्यटन लगायतका अरु कुराहरुलाई मात्रै भन्दै आएका छौं । वास्तवमा बिकास र समृद्धिको छैटौं पूर्वाधार खेलकुद हो ।
हाई अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरको कुरा पनि छ ?
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारणले पनि हाई अल्टिच्यूड टे«निङ सेन्टर बनाउन पर्छ भन्ने २ वटा कारण छ । एउटा हाम्रै खेलाडीका लागि । नेपाली खेलाडीहरुलाई अभ्यास गराउनका लागि आवश्यक छ ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका लागि । नेपालमा यस्तो खालको प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सकियो भने सशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई राखेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं । त्यो हामी व्यवसायिक हिसाबले चलाउन सक्छौं ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्था हाई अल्टिच्यूड नै छ । यहाँ हिमाल पहाड धेरै छन् । हाम्रो देशको अवस्था अनुसार काठमाडौंबाट नजिक रहेको र मेलम्चीको बाटो बनिसके पछि हेलम्बु एउटा ठाउँ हुन सक्छ ।
यसैगरी मनाङ र जुम्लामा थोरै मात्रामा भए पनि लगानी शुरु गरिसकेका छौं । त्यस्तै बाग्लुङ, घान्द्रुक, मुस्ताङ र लुक्लामा पनि बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ । धेरै ठाउँमा निर्मार्ण गर्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव आए पनि हामीले एकै पटक धेरै ठाउँमा निर्माण गर्न सक्दैनौ ।
हाम्रो हाई अल्टिच्यूड भनेको खाली डाँडामात्र सम्याए हुन्छ भन्ने छ । त्यस्तो होइन । त्यहाँको खेलाडीलार्ई सधैं हाई अल्टिच्यूड छ नि उसलाई किन चाहियो ?
हामीलाई त तल मैदान अर्थात समथर भू भागमा बसेका खेलाडीलाई दक्ष बनाउन साथै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका लागि हाई अल्टिच्यूड प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त खेलाडीलाई राख्न त हामीलाई सुविधासम्पन्न खेलाडी छात्राबास चाहियो, होटेल चाहियो । त्यहाँ स्वीमिङ पूल चाहिन्छ, वातानुकुलित कर्भड हल चाहिन्छ । होस्टेल चाहियो, क्यान्टिन चाहियो, लाइब्रेरी चाहियो, फिटनेश सेन्टर चाहियो, मेडिकल चाहियो सबै कुराहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी जम्मै कुराहरु गर्नकालागि अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ ।
अहिले हामीले हाईअल्टिच्यूड हाईअल्टिच्यूड भनेका छौं । यो त अहिले निर्वाचनका बेला स्र्माट सिटी भनेको जस्तै भाको छ । वास्तवमा हामीले भन्नका लागि भन्दा पनि एकै पटक धेरै वटा यस्ता प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सक्दैनौं । त्यसका लागि अर्बौ रुपैयाँ चाहिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पहिलो हाई अल्टिच्यूड सेन्टर हेलम्बुमा बन्न सक्छ । त्यहाँको जग्गा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । हामीले जग्गा माग गरिरहेका छौं । यदि जग्गा प्राप्त भयो भने हामीले हेलम्बुमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।
दोस्रो मनाङ हुन सक्छ । पर्यटकिय हिसाबले त्यहाँ उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसैगरी लुक्ला पनि अर्को सम्भावित ठाउँ हो । सगरमाथाका कारण विश्व मानचित्रमा चिनिएको ठाउँ पनि हो । एयरपोर्टको पनि सुविधा भएको हिसाबले त्यहाँ पनि उपयुक्त हुन्छ ।
यसैगरी मुस्ताङमा नेपाली सेनाले एक किसिमले हाईअल्टिच्यूड तालिम गरिरहेको छ । त्यसमा हामीले थोरै लगानी गर्नेहो भने मुस्ताङमा पनि सम्भावना छ । अहिले धेरै विकल्पहरु भए पनि ती ठाउँमा क्रमश बनाउँदै जानुपर्छ तत्काल हेलम्बु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
विश्व र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिपमा नेपाल दशौं
सागका कारण परिषद्ले १५ अर्व बजेट माग्ने तयारी
वर्ल्ड र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिपः स्प्रीन्ट विधामा नेपाल पाँचौ
सागकाे बजेटका लागि बैठक बस्दै
सागकाे बजेट निर्धारणका लागि भाेली बैठक बस्ने
नेपालले अर्काे महिना अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने
नेपाली युवा क्रिकेटरलाई प्रशिक्षणकाे वाताबरण मिलाउन सन्दीप…
क्रिकेट : ४ रनमा अल आउट ! कसैले खाता खोलेनन्
एमएस धोनीका समर्थकलाई खुशीको खबर